Sidey sharci ku noqon kartaa in sanad dib loo dhigo kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya? - Jigjiga Online
HomeSomalidaSidey sharci ku noqon kartaa in sanad dib loo dhigo kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya?
Sidey sharci ku noqon kartaa in sanad dib loo dhigo kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya?
Dowladda Kenya ayaa dooneysa in dib u dhigis lagu sameeyo furitaanka dhageysiga kiiska muranka xadka badda ee ay Soomaaliya la wadaagto, halka Soo aaliya lagu soo warramayo inay gaashaanka u daruurtay arrintaas.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay BBC-da ka heshay ilo kala duwan ayaa sheegaya in maxkamadda caddaaladda caalamiga ah ee ICJ, oo uu fadhigeedu yahay magaalada Hague ay u yeertay wakiillo ka kala socda Somalia iyo Kenya si arrintan loo eego.
Dalabka ay Kenya gudbisay ayaa ah in dacwadda dib loo dhigo ilaa bisha September ee sannadka 2020-ka.
Wakiillada dhinaca Soomaaliya ee tagay magaalada Hague oo kala ah Ra’iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Federaalka Mahdi Maxamed Guuleed, Xeer ilaaliyaha Guud Axmed Cali Daahir, Safiirka Somalia ee midowga Yurub danjire Cali Fiqi, iyo mid ka mid ah kooxda xagga sharciga u qaabilsan Somalia, ayaa ku adkeysanaya in dalabkaas aysan aqbalin.
Garsoorka maxkamadda ayaa laga dhowrayaa inay eegaan sababaha ay Kenya u dooneyso dib u dhigista dacwadda, si ay go;aan uga gaaraan in la oggolaado iyo inkale.
Siduu Sharci ku noqon karaa Oggolaanshaha dib u dhigista Kenya?
Dhawaan maxkamadda ICJ ayaa oggolaatay in labo bilood dib loo dhigo dhageysiga kiiska oo muddo dheer la sugayay ka dib markii ay Kenya sheegtay inay u baahantahay wakhti ay ku hesho qareenno u dooda.
Hase yeeshee, maalmo ka hor waxaa soo baxay warar kale oo sheegaya in wakiillada Kenya ay doonayaan dib u dhigis kale oo gaareysa ilaa hal sano.
In ay Soomaaliya aqbasho
Mid ka mid ah shuruudaha ugu waaweyn ee maxkamadda ay ku xireyso in la ansixiyo dalabkaas ayaa ah in saraakiisha ka socota dhinaca Soomaaliya ay oggolaadaan dalabkaas.
Balse maadaama ay ku gacan seyreen, maxay tahay waddada kale ee furan?
In maxkamaddu ay ku qanacdo codsiga Kenya
Dr Cabdikariim Maxamed Soomaali, oo ah shrci yaqaan jooga magaalada Muqdisho ayaa BBC-da u sheegay in sida kaliya ee uu dalabkaas ku hirgali karo ay tahay in Soomaaliya ay raalli ka noqoto ama in garsoorka maxkamadda ay ku qancaan sababaha ay Kenya u cuskatay codsigeeda dib u dhigista ah.
Laakiin wuxuu sheegay in marka aan oggolaansho laga heysanin Soomaaliya aan si toos ah loo oggolaaneynin dalabka sanadka ah, oo taas baddalkeeda ay maxkamaddu qabaneyso wakhti go’an.
“Maxkamadda go’aanka ay arrintan ka qaadan karto wuxuu ku xiranyahay inay isla oggolaadaan labada dowladood ee ay arrintu khuseyso, laakiin marka aysan labada dhinac raalli iskaga ahayn, sidii markii dhaweydba dhacday oo kale, maxkamaddu waxay fiirineysaa codsigaasi, wayna qiimeyneysaa, markaasna waxay soo saareysaa amar ay Kenya ku siineyso inay labo bilood ku raadsadaan qareenno difaaca. Sababtoo ah marka uu waddan dhaho dib hanaloogu dhigo, taasina aan raalli looga ahayn, waxay maxkamaddu eegeysaa sida loogu qanci karo sababaha”.
Ma laga yaabaa in mar labaad dib u dhigis ay dhacdo?
Kenya ayaa dhawaan laga oggolaaday in la siiyo wakhti labo bilood ah oo ay qareennadeeda ku diyaariso.
Su’aasha ku saabsan in mar kale la siin karo wakhti dheeraad ah ayaan u bandhignay Garyaqaan Cabdikariim, wuxuuna yiri: “Haddii labada dhinac ay wadahadal siyaasadeed ugu heshiiyaan in dib loo dhigo kiiska maxkamaddu way oggolaaneysaa laakiin haddii mid uusan raalli ka ahayn markaas uma maleynayo in Kenya laga oggolaan karo dalabkeeda, sababtoo an horay ayaa loo siiyay labo bilood oo ay qareenno difaaca ku raadsato”.
KMuranka la xiriira xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa horseeday xiisad diblumaasiyadeed oo u dhaxeysa labada waddan ee dariska ah.
Bilihii lasoo dhaafay ayuu cirka isku sii shareerayay khilaafkan, waxayna mas’uuliyiinta labada dal warbaahinta isku marsiinayeen hadallo kulkulul.
Waxaa suurtagali waayay dadaallo ay si shakhsi ah hoggaamiyeyaasha goboilka iyo kuwa Afrika isugu dayayeen inay arrintan xal ugu helaan.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa kulan magaalada Nairobi ka dhacay isugu geeyay madaxweyneyaasha Kenya iyo Soomaaliya, inkastoo natiijo fiican uusan noqonin.
Madaxweynaha Masar Cabdifataax El-Sisi, oo ah madaxa midowga Afrika ayaa isagana isbuucii lasoo dhaafay kulansiiyay labada hoggaamiye si uu isafgarad u dhaco.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir madaxeedkii Qaramada Midoobay ee dhawaan ka dhacay magaalada New York uga dhawaaqay in dowladdiisu ay arrinta ku saabsan kiiska badda uga war sugeyso maxkamadda ICJ oo kaliya, taasoo ka dhigan in wax wadahadal siyaasadeed ah aysan Soomaaliya diyaar u ahayn.
Maxkamadda ICJ Oo Go’aan Adag Inshaha Kaga Dhufatay Kenya Iyo Somaliya
UK: Maxkamad Xukuntay In Xabsiga La Dhigi Karo Raíisal Wasaare Boris Johnson